10 2020 အတွက်ထိပ်တန်းအခမဲ့အေးဂျင့် | ဥရောပလွှဲပြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်
Tuttosport အစီရင်ခံစာများ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည်ဂျူဗင်တပ်စ်တိုက်စစ်မှူးနှင့်နှုတ်ဖြင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည် မာရီယို Mandzukic ခရိုအေတိုက်စစ်မှူး၏လက်မှတ်အပေါ်။
၀ ါရင့်ကစားသမားသည်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကောင်တာ မှနေ၍ Old Trafford သို့လအနည်းငယ်အကြာပြောင်းရွှေ့လာသည်။ လက်တွေ့အကောင်အထည်မဖော်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအပြီးတွင်သူတို့သည်ဇန်နဝါရီလကိုအာရုံစိုက်လာကြပြီး၎င်းတို့သည်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပုံရသည်။
Mandzukic သည်ကာတာရှိ Al-Rayyan အားဥရောပအကောင်းဆုံးလိဂ်များ၌နေထိုင်ရန်တစ်နှစ်လျှင်ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုး7ကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ အကယ်၍ သဘောတူညီချက်သည်တရားဝင်ဖြစ်ပါကဇန်နဝါရီလ 1er ကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။
Rakitic, Inter Milan ၏ပစ်မှတ်များအကြား Matic
အင်တာမီလန်မီလန်သည်ဇန်နဝါရီလအပြောင်းအရွှေ့ ၀ င်းဒိုးသို့ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ခုရောက်ရှိရန်စိတ်အားထက်သန်နေသည်။ Calciomercato သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် .
အထူးသဖြင့်သူတို့ဟာ Juventus ကို Serie A ခေါင်းစဉ်အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိန်ခေါ်ချင်ရင်၊ အိုင်ဗင် Rakitic et နီမန် MATIC ကလပ်၏အဓိကပစ်မှတ်နှစ်ခုဖြစ်သော်လည်းပြင်ပအလောင်းအစားများရှိနေ ဦး မည်ဟုအစီရင်ခံစာကဆိုသည်။ Sergej Milinkovic-Savic ].
Sandro Tonali အသင်း၏အသင်းသားလည်းဖြစ်သည်ဟုသံသယရှိသော်လည်းပြတင်းပေါက်မဖွင့်မီလအနည်းငယ်အကြာတွင်ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများကို Conte အတွက်ရည်ရွယ်သည်ဟုထင်မြင်မိသည်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံမန်ချက်စတာစီးတီးသည် Bournemouth ကြယ်ပွင့်ကိုရွေးချယ်လိုသည် နာသန် Ake ဇန်နဝါရီလအကူးအပြောင်းကာလအတွင်း, မန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်း .
ပရီးမီးယားလိဂ်၏အစတွင်မြို့သည်တစ်ခါတစ်ရံရုန်းကန်ခဲ့ရသည်၊ သူတို့၏ကာကွယ်ရေးပြproblemsနာများသည်အဓိကပြproblemsနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုတွင်မူ အကယ်၍ သူတို့က Ake ကဲ့သို့တစ်စုံတစ်ယောက်အားကလပ်သို့ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါကလီဗာပူးလ်အတွက်ပြိုင်ဘက်အသင်းအတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောလက္ခဏာဖြစ်လာနိုင်သည်။
24 သက်တမ်းရှိဒတ်ခ်ျ Ake သည်သူပြန်လာချိန် မှစ၍ ချယ်ရီသီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ 2017 တွင်မူရင်းဇာစ်မြစ်သည်ချယ်လ်ဆီးတွင် ၆ နှစ်ကြာသည်။
- မော်ရင်ဟိုသည်Nရာမလိဂ်ဖြစ်သော 1 အသင်းနှင့်လိုင်ယွန်အသင်းကိုပြန်လာခွင့်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ CMR သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်နေဂျာဟောင်းကသူ၏ပထမဆုံးရည်မှန်းချက်မှာပရီးမီးယားလိဂ်သို့ပြန်လာရန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျူဗင်တပ်စ်သည်လက်မှတ်ထိုးရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ချယ်လ်ဆီး၏လက်ဝဲကျော အီမာဆန် Calciomercato ကအစီရင်ခံသည် ။ 25 ကစားသမားနှစ်များသည်အီတလီ၏ချန်ပီယံတို့၏အဓိကပစ်မှတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ချယ်လ်ဆီးအနေဖြင့်သူမအဟောင်းကိုတားဆီးရန်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/3961946/transfer-talk-manchester-united-reach-mario-mandzukic-agreement